Review: Chef na The Dish | Otu Di na Nwunye
Chef And The Dish: Ahụhụ zuru okè maka Foodies International
October 8, 2018 / Ahapụ a Comment
Mgbe ọ bụla anyị na-eme njem ná mba ọzọ, anyị ga-ahụ na ị ga-achọpụta ihe oriri na ihe ụtọ ndị dị na mpaghara, karịsịa achịcha omenala. Ma, olee mgbe anyị ga-esi hụ ma ghọta otú e si eme ha n'ezie, karịsịa site na onye isi nri mpaghara? Ọfọn, mma nke ukwuu mgbe! Anyị na-achọ mgbe niile ịmatakwu banyere nri anyị na-enweta gburugburu ụwa, n'ikpeazụkwa, e nwere ụzọ ị ga - esi mee ya - nri gị na kichin!
N'oge na-adịbeghị anya, anyị na ụlọ ọrụ nwere ọrụ pụrụ iche pụrụ iche nke a na-akpọ The Chef na The Dish - ụlọ ọrụ nke pụrụ iche na abalị na otu nnọkọ oriri na ọṅụṅụ ebe ị na-enweta ndu ndu nri site n'aka ọkachamara ọkachamara. Ebe kacha mma? Ndị chefs na-arụ ọrụ Chef na Na efere chebara ezigbo nri, nri mpaghara, ma bịa gị site na Skype si mba ha!
Oge anyị pụrụ iche bụ n'ezie ezigbo pụrụ iche - agbamakwụkwọ ụbọchị iri anyị! N'ịchọ ihe dị iche iche ị ga-eme, ihe dị iche na nke obi ụtọ, mụ na Tracy kpọtụrụ Chef na The Dish, ma hụ ụzọ zuru oke iji mee ememe ụbọchị anyị ọnụ!
Ebumnuche ahụ dị mfe, ma na-adọrọ mmasị - ọkachamara ọkachamara ọkachamara na nri mpaghara na-abịakwute gị via Skype si ebe ahụ. Onye na-eri nri na-enye gị nzụlite na mba ha na mpaghara ha, na ndị na-esi nri n'ụlọ ha, tupu ha eduga gị site na nkwụsị, nduzi ntụziaka maka ịkụzi nri dị ezigbo mkpa - ezigbo ụzọ ndị chefs maara na nri ahụ kachasị mma .
Malite site Jenn Nicken, The Chef na The Dish bụ ihe na, ozugbo anyị chọpụtara, anyị na-adị mfe nwere iji gbalịa - na Tracy na onye ọ bụla nwere ihe ndị na-emepụta nri mgbe afọ ole na ole na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ahụmahụ anyị bụ, n'eziokwu n'eziokwu, dị ịtụnanya. Nke a bụ ndị na-adịghị mma na ọtụtụ ihe ụtọ na-enye obi ụtọ anyị nwere n'oge dị anya, na usoro site na Nzọụkwụ 1 ruo na ngwụsị nke klas anyị bụ ihe efu magburu onwe ya.
Anyị na-enye gị nyochaa n'eziokwu, ma gwa gị kpọmkwem ụdị ahụmịhe anyị nwere na klas anyi na Chef na The Dish, na ihe mere anyị ji nwee obi ụtọ ịkọrọ gị banyere ọrụ a dị oke mkpa nke Jenn Nicken na ìgwè ya na-enye onyinye!
Nzọụkwụ 1: Nhazi
Mgbe ị na-ebu ụzọ gaa Che Chef na The Dish maka nna gị ukwu nri klas, ị ga-achọpụta ole nhọrọ nchịkọta nhọrọ maka klas gị - na ihe niile sitere na Southern American Cuisine na European Spanish, na Northern Italian na ọbụna Asia Classics. N'ime nhọrọ mba ọ bụla (mba asatọ dị ka ederede isiokwu a - na -eto eto), enwere nkewa n'ime nri a.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme otu klas na nri Ịtali, ị ga-enwe ike ịhọrọ nlebara anya maka nri a na-akụziri gị ka ị dịrị ndụ - gụnyere ilekwasị anya na Parmigiano Reggiano (onye anyị họọrọ), Raviolo, Sicilian, Milanese, na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ n'ime nke ọ bụla.
Na-arụ ọrụ na Jenn na ndị otu ya, ị ga-ahọrọ ụzọ gị ma chọpụta oge dị mma iji jide klas gị. Tupu nke a, kedu, Chef na The Dish na-ahụ na ị kwadebere nke ọma site na iziga gị ndepụta zuru nri, gbakwunyere onye isi nri nke ga-eduga klas gị, tinyere usoro ihe omume tupu oge agafe nke kichin, akụrụngwa, na nhazi ihe.
Nke na-eduga anyị na Nzọụkwụ 2 ...
Nzọụkwụ 2: Oge Nkwadebe
Jenn na-abịakwute gị, na-ebi site na Skype, iji kwurịta usoro nke ụzọ gị, na-enye gị ozi nzụlite banyere onye isi nri nke ga-eduga gị, ma jide n'aka na ị maara otú e si etinye kọmputa gị maka ahụmịhe kachasị mma. Na mgbakwunye, ọ na-edu gị site na nghọta zuru ezu banyere ndepụta nri, ihe ị ga-esi nri, na nghọta nke ihe niile a ga-achọ site na usoro ahụ.
Na mgbakwunye na nke a na-enye aka, Jenn nwere obi ụtọ na-arụ ọrụ na, ozi, ike na enyemaka! Nke a bụ ihe dị mkpa na usoro anyị nke nyeere anyị aka ịbanye n'eziokwu anyị n'eji obi ike na anyị ga-enwe nnukwu oge, ma nweta ihe kachasị na ahụmahụ ahụ!
Onye ndu nke klas anyị bụ Chef Paola Martinenghi, bụ onye bịakwutere anyị bi n'ụlọ ya na Milan, Ịtali! Nlekọta onye nlekọta nke Paola bụ nnukwu ma dị mma, onye isi nri nke Michelin bụ onye gụsịrị akwụkwọ na klas nke ALMA dị na Parma, Ịtali. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere 9FoodPR, otu nzukọ a raara nye ịchọta ndị kasị emepụta gastronomic Italy iji chekwaa ma kwalite usoro omenala ha.
Ozugbo ị kwadoro na njikere ịga ebe ahụ bụ naanị otu nzọụkwụ fọdụrụ ...
Nzọụkwụ 3: Oge iji nri!
Tupu klas gị, ịchọrọ iji obere oge na-enweta ihe ndị e ji edozi gị, ihe ndị e ji esi nri, efere, na kichin dị njikere. Ịmalite ịhazi na-eme ka ị nweta ahụmahụ na-enweghị ntụpọ, ma mee ka ị nwekwuo obi ụtọ na ahụmịhe!
Chef Paola na-akụziri anyị ka anyị sie nri iri atọ, ihe niile nwere otu n'ime ihe ndị na-akọwa nri Italian - Parmigiano Reggiano. Maka ngwa ngwa, o duuru anyị site na nkwadebe nke bruschetta dị egwu, nke na-eso ezigbo carbinara, na pear poached na ricotta maka eji megharịa ọnụ.
Ị gaghị Kwere lee ka nke a si bụrụ ihe na-atọ ụtọ, ọ ga-atọkwa ụtọ ịme!
Mbụ, Chef Paola ka anyị malite site na ịkwadebe pears maka ọzara ...
... nakwa na ngwakọta ricotta iji gwụchaa ya n'oge oge.
Ozugbo e mechara isi nri anyị, anyị malitere ịkwanye bruschetta mana anyị na-egbu ụfọdụ nri Italian (naanị anyị ga-ahụ French, ma ọ bụ na ọ ga-abụrịrị na ọ ga-arụ ọrụ ya!)
Kedu ihe bruschetta na-enweghị peeled, tomato a kụrụ?
Ozugbo a kwadoro nke a na ihe ndị ọzọ dị mkpa maka bruschetta dị ukwuu, anyị kwagara na prepping maka carbonara anyị mgbe bruschetta mere.
N'ezie, ọ dịghị carbonara dị mma na-enweghị ezigbo, Italian-made pasta ...
Na, obere panchetta ...
Mgbe ahụ, Chef Paola kụziiri anyị ihe omimi banyere otu esi eweta ya niile iji mee ka a mara mma, omenala, ma na-atọ ụtọ carbonara!
Mgbe ahụ, ọ bụ oge iji wetara ya niile, malite na bruschetta ...
Mgbe ahụ na-emecha apụ poached ube dessert ...
Nsonazụ ahụ? Ihe atọ ihe omimi!
Ahụmịhe anyị na Chef na The Dish, Chef Paola, na ndị Jenn Nicken bụ otu ahụmahụ nke otu anyị na-atụ anya onye ọ bụla onye hụrụ nri na ezigbo oge ga-enweta.
Ihe si na nri ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwetụrụla, otu usoro Ịtali n'ezie nke mere ka anyị ghara ịgafe ebe anyị na-aga ebe ahụ - mere ka anyị nwee kichin! Anyị ukwuu kwadoro Chef na The Dish - n'ihi na ụdị nri na-agwa gị okwu - maka abalị zuru oke, nri abalị na ndị enyi, ncheta, ma ọ bụ nanị maka oge ntụrụndụ! Mgbe ị na-enweghị ike ịga na nri ị na-arọ nrọ, nwere onye nri na-aga kpọmkwem n'ime kichin gị!
Category: Di na Nwunye, Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, kasị Popular, Ezi ntụziaka, Nyocha Tags: isi nri, nri, nri, foto nri, Italy
← Ebee Ka I Nọrọ na Santorini
Ebee Ka I Nọrọ na Amsterdam →
Otu esi emefu 2 zuru okè na Athens
Srimp Fra Diavolo
Ihe kacha mma 5 na-eme na Beijing
Nri ụtụtụ nri Casserole
Categories Họrọ AtiyaụlọAfricaAirlinesAmericanAntarcticaAppetizerArgentinaArmeniaArts & MusicAsiaAustraliaAustriaAzerbaijanBackpackingBelgiumBoliviaBonaireBotswanaBrazilNri ụtụtụBritishCaliforniaCaribbeanCentral AmericaChileChinaColombiaDi na NwunyeE Si Nweta kaadịOkpughariCubaculinaryCzech RepublicỤbọchị NjemDenmarkeji megharịa ọnụEgyptEmploymentEnglandEuropeNjem EzinụlọNjem ỤmụakaFloridaNri na ihe ọṅụṅụFranceEbe nkiri ebe nkiriIhe efuFrenchFrench GuianaGeorgiaGeorgia (Europe)GermanGermanyGreeceGreekNjem OtuGuatemalaOzi ndị aHawaiiHealthHispanicHistoryNjem njemHondurasHotelsEnyemaka mmadụHungarianHungaryIcelandIllinoisIndiaIndianIndonesiainspirationalIowaIrelandIrishItalianItalyItinerariesJapanKenyaỊmụ asụsụObere alaMadagascarIsi akwukwoMaineIme EgoMalaysiaMaldivesMassachusettsMexicoMexicoMichiganObere-BlogMinnesotaMissouriMonacoMongoliaMoroccokasị PopularMozambiqueNamibiaNetherlandsNevadaNew YorkNew ZealandNewsNorth AmericaNorth CarolinaNorth DakotaOceaniaOregonOutdoorsParaguayPennsylvaniaPeruPhilippinesPhotographyPolandPortugalPuerto RicoEzi ntụziakaResortsNyochaỤzọ NjemRomaniaRomanianRussiaRussianSaladScotlandScottishSelf ImprovementSEOSeychellesAkụkụ nke efereNjem Njem OchieOfeSouth AfricaSouth AmericaSouth DakotaSpainEgwuregwuSurinameSwedenSwedishSwitzerlandTanzaniaTechnologyTennesseeomenalaTransportationNjem ịde blọgụNjem ego njemEme njemNjem GearNhazi njemTunisiatoro toroUncategorizedUnited KingdomUnited StatesUruguayOnye anaghị eri anụVenezuelaVermontVietnamVietnameseVirginiaWalesWashingtonWashington DCWisconsinZambiaZimbabwe
Archives Họrọ net July 2019 June 2019 Ka 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 Ka 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 Ka 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016
american Asia Barcelona biya bonaire di na nwunye Dublin England Obodo Békè florida nri France Jémanị Greece ezumike hotel hotels ire ire Italy Lisbon london Mexico Miami music New York North America n'èzí Paris Peru uzommeputa Ezi ntụziaka review reviews Rom santorini n'ebe ndịda America Spen ihe na-eme njem njem njem njem atụmatụ njem United Kingdom United States Vienna